သောသီခို: တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အမြန်လုပ်ဖို့ KNU တိုက်တွန်း
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အမြန်လုပ်ဖို့ KNU တိုက်တွန်း
KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး နဲ့ မြန်မာအစိုးရ တပ်ဖွဲ့တွေကြား တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေသေးတာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် နောက်ထပ် တွေ့ဆုံမှုတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ KNU က ပြောလိုက်ပါတယ်။ KNU နဲ့ မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်တွေ အကြား နောက်ထပ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ စီစဉ်နေပေမဲ့ ဖြစ်မလာသေးတာကြောင့် KNU က အခုလို တိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ အသေးစိတ်ကို မနန္ဒာချမ်း က တင်ပြထားပါတယ်။
KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နော်စီဖိုးရာစိန် ဦးဆောင်တဲ့ အရပ်ဘက်နဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ မြန်မာအစိုးရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အကြား တနင်္လာနေ့မှာ တတိယအကြိမ် ထပ်မံ တွေ့ဆုံဖို့ ပြောဆိုထားပေမဲ့ မြန်မာအစိုးရဘက်က အဆင်မပြေသေးတာကြောင့် ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ KNU က ဒီကနေ့ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ နှစ်ဘက်အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးထားပေမဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေသေးတာကြောင့် ဒီကိစ္စကို ပိုပြီး ခိုင်မာအောင် ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ မူလက စီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ နော်မေဦး က ပြောပါတယ်။
"သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့က ကျမတို့ မြ၀တီမှာ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးဆိုပြီး လုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာ ကျမတို့က ဘယ်နေရာမှာတွေ့မယ်။ ဘယ်နေ့မှာတွေ့မယ်။ ဘယ်အကြောင်းတွေ ပြောမယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် တွေ ချခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ၂၇ ရက်နေ့မှာ မနက်ဖြန်ပေါ့လေ တတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲဟာ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တုန်းက ကြိုတင်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ အဖြေဖြစ်ပါတယ်။"
ဒါပေမဲ့လည်း ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မင်း ကတော့ နှစ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်တွေအကြား တနင်္လာနေ့ တွေ့ဆုံမှာ မဟုတ်သလို ထပ်မံတွေ့ဆုံမယ့် ရက်ကို ညှိနှိုင်းရဦးမယ်လို့ အခုလို ပြောပါတယ်။
"ကျနော်သိထားတာကတော့ - မြ၀တီမှာ တွေ့စဉ်ကာလတုန်းက အဲ့ဒီရက်ပိုင်းလောက် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ မနက်ဖြန် ဆိုတာကိုတော့ သေသေချာချာ သတ်မှတ်ခဲ့တာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ နှစ်ဘက်စလုံးက အဆင်ပြေတဲ့ရက်ကို ပြန်ညှိမယ်လို့ပဲ ပြောတာ၊ ရက်ရွှေ့လိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ညှိနှိုင်းကတည်းက ၂၇ မှာ တွေ့မယ်ဆိုတဲ့ အတိအကျ အဲ့လို သတ်မှတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုကတော့ မနက်ဖြန် တွေ့ဖို့ အစီအစဉ် မရှိပါဘူးခင်ဗျ။ တွေ့ဖို့ကတော့ နှစ်ဘက်စလုံးက အခြေအနေပေးတဲ့ အချိန်မျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဟိုဘက်မှာလည်း အဆင်ပြေမယ့်ရက်၊ ဒီဘက်မှာလည်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေက အလုပ်ကိစ္စလေးတွေ သူတို့ ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ ရက်ကို ပြန်ညှိကြရလိမ့် မယ်နဲ့ တူပါတယ်။"
KNU ကတော့ ခိုင်မာတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး မရှိသေးသ၍ ကရင်ပြည်နယ်တွင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာမို့ - ဒီလ ၅ ရက်နေ့က မြ၀တီမြို့မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ကြိုတင်ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးအတွင်း ပြည်သူလူထုဘ၀ လုံခြုံရေး အာမခံနိုင်မယ့်ကိစ္စကို အဓိကထား ဆွေးနွေးဖို့ ရှိတယ်လို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နော်မေဦး က အခုလို ဆက်ပြောပြပါတယ်။
"ကျမတို့က တတိယအကြိမ်မှာ ပြည်သူ့လူထုဘ၀ လုံခြုံရေးဆိုတဲ့အချက်ရဲ့အောက်မှာ အဓိက အချက်ကြီး ၂ ချက်ကို ဆွေးနွေးဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်။ ဒါက နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အသိပေးထားပြီးသား၊ သဘောတူထားပြီးသား။ ဘာတွေလဲဆို ရင် ပြည်သူလူထုဘ၀ လုံခြုံရေး အာမခံနိုင်ဖို့အတွက် တပ်နေရာ ပြန်လည်ချထားရေးနဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် လိုက်နာရမယ့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များဆိုတဲ့ ဒီနှစ်ချက်ကို ဆွေးနွေးဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။"
အခုလို တတိယအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲ မဖြစ်မြောက်သေးပေမဲ့ - အစိုးရ နဲ့ ကေအန်ယူအကြား တဖက်နဲ့တဖက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နေ တာမှာ - အပြန်အလှန် နားလည်မှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အဆင့်မှာတော့ ရှိတယ်လို့ ကေအန်ယူက အသိအမှတ်ပြုခဲ့ ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကရင်ပြည်နယ်တွင်းမှာ ခိုင်မာတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် အမြန်ဆုံး တွေ့ဆုံကြဖို့ကို KNU က တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရနဲ့ KNU အကြားမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က ပြည်နယ်အဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနဲ့ ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် KNU နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အခုလို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တဲ့အထိ သမိုင်းဝင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး - KNU အနေနဲ့လည်း တော်လှန်ရေးကာလ ၆၃ နှစ်တာ အတွင်းမှာ ဒီဆွေးနွေးမှုတွေဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး တန်းတူရည်တူ မျှတမှုရှိတာကို တွေ့ရတယ်လို့ မှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်ရှင်။
Posted by ဇင်ယော် at 2:49 AM
poe kwa said...
Karen Grammar - ကရင် သဒ္ဒါစာအုပ်
Karen Youth UK - နှစ်ပါတ်လည်အစည်းအဝေး
သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ၀န်ကြီး အပြောင်းအလဲ KNU အကောင်ြး...
ကျနော်တို့ နှင့်အတူ ရှင်သန်နေရမည့် စောဘဦးကြီး၏ အဖ...
အစိုးရနှင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေးမည့် အချိန်နှင့်ပါတ်သက်၍...
From Map Ta Phut to Dawei, Aug 27, 2012 by Kwe Ka ...
Bitter Wounds and Lost Dreams: Human Rights Under ...
နေ့စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၈-၂၈-၂၀၁၂) VOA
ကရင့်ရိုးရာလက်ချည်ပွဲသို့ ပေးပို့ သော (KYO) ကရင်လူ...
ရခိုင်ပြည် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ပွဲကြောင့် ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ပို...
VOA နေ့စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၈-၂၅-၂၀၁၂)
လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှုနှင့် အပစ်အ...
မြန်မာအစိုးရမှ တတိယအကြိမ်မြောက် အပစ်အခပ်ရပ်စဲရေးဆေ...
မြစ်ဆုံကဲသို့ သောက်ရေခပ်ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးကြပါ။
ဆူ.... ကညီဖိခဲလzာ် (ပေးစာတစ်စောင်)
နယ်ခြားစောင့်တပ် တိုက်နယ်မှူး - တချိန်က ဒီကေဘီအေ ၉...
မူးယစ်ရာဇာ နော်ခမ်း ကို မြန်မာစစ်တပ်နှင့်ရဲ သွားယေ...
ငြိမ်းချမ်းရေး စကားဝိုင်းများ နောက်ကွယ်
BGF ၂နှစ်ပြည့် အခန်းနား (ရုပ်သံ)
ပလောင်ဒေသ TNLA နှင့် KIA ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေး
ရေအားလျှပ်စစ်အတွက် Megga Dam project တွေကြောင့် ဒေ...
အာဇာနည်နှင့် ပက်သက်၍ ပဒိုစောသမိန်ထွန်းနှင့် တွေ့ဆံ...
သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ရာတွင် လူမျိုးအမည် မှန်ကန်စွာ...
Myawaddy KNU office opens (RFA)
နယ်ခြားစောင့်တပ် ၂ နှစ်ပြည့်အခမ်းအနား (ရုပ်သံ)
MPSI Statement for Clarification and Information -...
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြောင်းထဲရောက်သွားမှာပေါ့" (အေ...
မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်း စစ်ရေး အခြေအနေ ပိုမိုပြင်း...
တားတားတို့ရွာပြန်ရတော့မှာလား.......
၄၈ နှစ်၊ ၁၄ ရက်ကြာ စာပေစိစစ်ရေး နိဂုံး
မြန်မာ နှင့် ထိုင်း အစိုးရပေါင်းပြီး ဒုက္ခသည်တွေကို...
KNU LIAISON OFFICE IN MYAWADDY (ရုပ်သံ)
Speech of the KNU Representative on Karen Martyr D...
မြဝတီ KNU ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်ပွဲ (ရုပ်သံ)
စတုတ္ထမြောက် ကေအဲန်ယူ ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်ပွဲ - မြ၀တြီ...
စတုတ္ထမြောက် ကေအဲန်ယူ ဆက်ဆံရေးရုံး ဖွင့်ပွဲ လူပရိဿတ...
တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း များကို မထောက် ပံ့ရန် ဂျပ...
ရခိုင်ပြည်နယ်အဓိကရုဏ်း ဦးသိန်းစိန်၏ အင်တာဗျူးအပေါ်...
ရွာအတွက်ကျမ ဆေးမှူး တစ်ဦး ဖြစ်ချင်တယ် (ဆောင်းပါး)
မြ၀တီတွင် တပ်မဟာနှစ်ခုအတွက် KNU ဆက်ဆံရေးရုံး ဖွင့်...
မြဝတီ-မဲဆောက် ချစ်ကြည်ရေး တံတားကြီး ၁၅ နှစ်ပြည့် အ...
နေ့ စဉ်သတင်း - 14 Aug 2012
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းနှင့် သီးသန်...
KNU General Secretary Naw Zipporah Sein's message ...
ကနေဒါနိုင်ငံ TORONTO မြို့ တွင် ကျင်းပပြီးစီးသော (...
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသော (၆၂) ကြိမ်မြောက် ကရင...
KNLA တပ်ရင်း ၁၀၁ တွင် ကျင်းပသော (၆၂)ကြိမ်မြောက် ကရ...
မြ၀တီမြို့နယ်ရှိ ကရင်လူငယ် ၁၀၀ကျော်နှင့် KYO ပထမဆံ...
ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၇)နယ်မြေတွင်ကျင်းပသော ကရင့်အမျိူးသ...
DKBA/KKO - ကျင်းပသော ကရင့်အာဇာနည်နေ့ဓါတ်ပုံမှတ်တ...
ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ ၇ နယ်မြေတွင် ကျင်းပသော ကရင့်အာဇာနည...
VOA အပတ်စဉ်တီဗီ - (KNU ပြောခွင့်ရ နော်မေဦး နှင့်...
The Best Tribute to Our Karen Martyrs is to Live T...
12 Aug 2012 - ကရင့်အာဇာနည်နေ့ ဂုဏ်ပြုတေး
တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ဒုက္ခသည်တေ...
သတ္တိရှင် ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် သို့ ဂုဏ်ပြုတမ်းချင်း
ခိုဖလာလေးခိုတိုက်ပွဲ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း ( ၆၂ ကြိမ်မြေ...
၆၂ ကြိမ်မြောက် ကရင့်အာဇာနည်နေ့ဂုဏ်ပြုတေး
“8888” ရှစ်လေးလုံး လိပ်ပြာ (သို့ မဟုတ်) ဂျပ်ဆင်ထိပ...
အီဂျစ်ရှိ မြန်မာသံရုံးအလံကို ဆန္ဒပြသူတို့ ဖြုတ်ချ၊ ...
နေ့ စဉ်သတင်း - ၈ ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၁၂
သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် လူထုလှုပ်ရှားမှု နှင့် ဥပဒေ...
လူထု သတင်းဖြန့် ချီရေးဆိုင်ရာ မီဒီယာ ဥပဒေ(မူကြမ်း)...
နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် လက်ခံရန် ‘မူ’ မရှိဟု ALP ပြေ...
RFA TV August 6, 2012
Government Delegation at Maetaw Clinic
အပစ်ရပ်ကာလ ဖားအံ ရွာသားများ အဓမ္မခိုင်းစေခံရ
မြ၀တီမြို့ တွင် ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့ ကေအဲန်ယူတွေ...
နေ့ စဉ်သတင်း - 5th Aug 2012
ကေအဲန်ယူနှင့်အစိုးရ ဘားအံတွင် နောက်တကြိမ် တွေ့ ဆုံ...
အစိုးရနှင့်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တို့မြ၀တီ...
Nicki Minaj Live @ Radio 1's Hackney Weekend 2012